Maxuu Farmaajo u qalqal Gelinaya Qaranimada Somalia ? – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 1 February 2019
Qorshe Itoobiya wadatay 2016 kii balse uu ka diiday Madaxweynihii xilligaas Xasan Sheekh Maxamud ayaa waxaa muuqata inuu xilligan aqbalay Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo.
Itoobiya ayaa markii ugu horeysay qabatay hoggaanka ciidamada AMISOM ee ku sugan Soomaaliya, iyadoo uu u hirgelayo qorshe ay in muddo ah wadatay.
Qorshihii Itoobiya sanado ka hor u socon waayay markii ay ka hor yimid Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud ayaa hadda waxaa aqbalay Farmaajo oo danihiisa gaarka ah ee xukun jaceylka eegaya.
Ciidamada Itoobiya ayaa Magaalada Muqdisho xasuuq ba’an ka geystay sanadihii 2006 ilaa iyo 2008, hase yeeshe markii dagaal lagala hor yimid ayaa heshiis ka dhacay dalka Jabuuti looga saaray Itoobiyankii joogay Xamar.